समाचार – Eps Sathi
रामेछापको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाका संजिव ढुङ्गेल २० वर्षका मात्रै भए । तर उनले शुरु गरेको कृषि फर्मले उनले अहिले नै महीनाको एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कमाई गरिरहेका छन् । १२ कक्षा उतीर्ण भएपछि कोही साथीहरू कमाउनको लागि त कोही उच्च शिक्षाको लागि विदेशिएका थिए । तर उनी भने ६ लाख रुपैयाँ लिएर बाख्रा पालनमा लागे । जम्मा ६ लाख रुपैयाँ लगानीमा शुरु गरेको कृर्षि फार्मबाट अहिले मासिक १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको ढुङ्गेलले बताए । संजिवले १५ ओटा बाख्राबाट शुरु गरेको व्यवसायमा २ वर्षमै ४२ लाख बढी लगानी गरिसकेका छन् । काठमाडौंको पद्मोवदय कलेजबाट व्यवस्थापन संकायमा १२ कक्षा उतीर्ण गरेपछि रामेछापमा गएर संजीवनी कृर्षि फार्म शुरु गरेका उनले बाख्रा, कुखुरा, टर्की र माछा लगायत पालन गरिरहेका छन्। साथीहरू धमाधम विदेशिदा उनलाई पनि एक पटक विदेशिने रहर नलागेको होइन । कोरियन भाषा परीक्षा समेत दिएका
दक्षिण कोरियाको ख्यङसान बोक्दो प्रदेशको उलजिन क्षेत्रमा आज विहानै देखि डँढेलो लागेको छ। जङ्गलमा लागेको आगो एकदमै तिब्र गतिमा चलेको हावाका कारण नियन्त्रणमा आउन नसकिरहेको स्थानिय सन्चार माध्यमहरुले जनाएका छन। कोरिया फरेस्ट सर्भिसले दिएको जानकारी अनुसार ख्यङसान बोक्दो प्रदेशको उलजिन क्षेत्रको जङ्गलमा आज स्थानिय समय अनुसार विहान ११ बजेर १७ मिनेटबाट आगलागी सुरु भएको थियो। समुन्द्री सतहबाट २ सय मिटरको उचाइमा रहेको यस क्षेत्रको बनमा लागेको आगो फैलदै नजिकैको बाटो सम्म पुगेको छ। कोरियाको फायर डिपार्टमेण्टले आज दिउँसो १ बजेर ५० मिनेटमा नेशनल फायर सर्भिस मोबिलाइजेशन अर्डर नम्मर १ लागु गरिसकेको छ। यो अर्डरपछि यस क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको अवस्थामा नजिकैका अन्य क्षेत्रबाट आगो नियन्त्रणका लागि जनशक्ति तथा उपकरणहरु ल्याइनेछ। जङ्गलमा लागेको आगो निभाउनका लागि अहिले ३४ वटा हेलिकप्टर तथा ६ सय
एसियाली मुलुकमा कम चामल खपत भइरहेको बेला दक्षिण कोरियाको धान बाली लगाउन क्षेत्रफलमा सन् २०२१ मा सबैभन्दा बढी गिरावट भएको तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयका अनुसार २०२१ मा ७८ हजार ४४० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.३ प्रतिशतले घटेको हो । सन् १९७५ पछि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालेदेखि यता यो सबैभन्दा द्रूत गतिमा कटौती भएको सङ्केत हो। सबैभन्दा ठूलो गिरावट आउनुमा एशियाली जनताको भोजन गर्ने बानीका कारण चमलको माग कम हुन थालेपछि कोरियाली कृषकले वैकल्पिक बाली लगाउन थालेका कारण भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। देशको प्रति व्यक्ति धान खपत एक वर्ष पहिलेको भन्दा १.४ प्रतिशतले कम भएर २०२१ मा ५६.९ किलोग्रामको न्यून रेकर्ड कायम भएको छ । यहाँको कूल धान उत्पादन भने १०.७ प्रतिशत बढेको र ३८ लाख ८० हजार टन पुगेको बताइएको छ । सन् २०२१ मासुख्खा
भक्तपूरको राधेराधे चोकको देब्रेपट्टि उभिएको अजङ्गको वेवारिसे भवन देख्नासाथ सबैको मनमा उब्जिने प्रश्न हो, ‘यति ठूलो भवन कसको होला ? किन यो हातलमा राखिएको होला?’ आदि । भाटभटेनी सुपमार्केटको छेवैमा निर्माणाधिन यो भवन वर्षौदेखि ठडिएको भएपनि ‘फिनिसिङ’ भने हुन सकेको छैन। उक्त भवनको निर्माण कम्पनी सौरभ समूहको भगीनी संस्था शुभश्री जगदम्बा डेभलपर प्रालि हो। आवासीय अपार्टमेन्टको लागि भनेर उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट निर्माणको स्वीकृति पाएको यो विशाल भवनको नाम ‘न्यौपाने टावर्स’ हो। भक्तपूरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकास्थित अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि शुभश्री जगदम्बा डेभलपरले प्राधिकरणबाट १३ तल्लाको स्वीकृति पाएको थियो । तर, पछि थप गरेर १७ तल्ला पुर्याइएपछि प्राधिकरणले स्पष्टिकरण सोध्यो। फलस्वरुप आकृति मात्रै ग्रहण गरेको भवनले पूर्णता पाउन सकेन । १३ तल्ला निर्माणको स्वीकृति प्राधिकरणबाट पाएको भएपनि छेवैम
काठमाडौ । केही दिन अघि सम्पन्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४५ औँ दिक्षान्त समारोहको एउटा फोटो भाइरल भयो। पढाईलाई उमेरले छेक्दैन, प्रेरक पात्र, प्ररणाको स्रोत जस्ता क्याप्सनमा अधिकांश मानिसका सामाजिक सञ्जाल उहाँको यो फोटो भाइरल बन्यो। उहाँ हुनुहुन्छ ७० वर्षीया नानीमैयाँ श्रेष्ठ। त्रिविको ४५ औं दीक्षान्त समारोहबाट १० हजार १ सय ८३ विद्यार्थीसँगै नानीमैयाँ पनि दीक्षित हुनुभएको थियो। पढाईलाई उमेरले छेक्दैन भन्ने कुरालाई देखाउन यथार्थ दुई फरक क्षेत्रबाट उदाएका महिला सेलिब्रेटीहरु पनि रहेका छन। कम्लहरी हुँदै राजनीतिमा उदाएकी संघीय सांसद शान्ता चौधरी र अर्की एक पात्र हुन् सदाबहार नायिका करिश्मा मानन्धर। अध्ययन सुरु गर्दाताका नै विद्यावारिधी (पिएचडी) सम्म पढ्ने अठोट शान्ता चौधरीले लिएकी थिइन। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले विश्राम खोज्दै गर्दा उनले पनि कम्लहरी जीवनबाट मुक्ति पाइन्। अर्थात् २०६२/०६३
रामेछापमा निर्माणाधीन ३ मेगावाटको सानो मिल्ती खोला जलविद्युत आयोजना अलपत्र पारेको भन्दै सेयरधनीहरूले विरोध जनाएका छन्। रिपोर्टर्स क्लबमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सेयरधनीहरूले मिल्ती खोला हाइड्रो पावर कम्पनीलाई विदेशमा पसिना बगाएका मजदुरहरूको लगानी डुबाउन खोजेको आरोप लगाएका हुन्। ६ वर्षअघि आयोजना निर्माण गर्नका लागि भनेर दक्षिण कोरियाबाट पठाएको ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ उठाइएको थियो। सञ्चालक तेन्जी शेर्पा, सुरेश लिम्बु, हरिबहादुर क्षेत्री र देवेन्द्र सोमान्थेलाई आयोजनामा लगानी गर्न ५ सय जनाले रकम पठाएका थिए । आयोजनाले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको पनि करिब ३ करोड रुपैयाँ लगानी डुबाउन लागेको सेयरधनीले बताएका छन् । बैंकले करिब ३० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो, तर काम सुरु नभएपछि रकम दिएको थिएन । बैंकको सम्झौता अनुसारको म्याद सकिएपछि ऋण तिर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । सूचना न
दक्षिण कोरियामा एक ४८ बर्षका पुरुष हराएको सूचना निकालिएको छ। सूचनामा भनिए बमोजिम उक्त ब्यक्ति कसैले भेटेको खबर गरेमा उक्त ब्यक्तिलाई निकै ठूलो पुरष्कार दिने समेत बताइएको छ। ति ब्यक्ति उनको परिवारका लागि यति महत्वपूर्ण छन कि परिवारले भेटाउनेलाई १ करोड कोरियन वन पुरस्कार समेत दिने घोषणा गरेका छन। आखिर झोला बोकेर ति ब्यक्ति कता गए होलान त? हराएका ति ब्यक्तिको उमेर ४८ बर्ष रहेको छ। उनको शारिरीक बनोट अन्तरगत उनको उचाई १ सय ६४ सेन्टिमिटर रहेको बताइएको छ भने उनले टाउकामा टोपि लगाएका छन। उनले कान छोप्ने पनि लगाएका छन। उनको टोपी निलो रङको रहेको देखिन्छ। उनले पछाडी एउटा झोला समेत भिरेका छन। उनले भिरेको झोलाको रङ खैरो खैरो सेतो सेतो रहेको देखिन्छ। उनको झोला एडिडास ब्राण्डको भएको बताइएको छ। झोलामा एडिडासको लोगो समेत देख्न सकिन्छ। ४८ बर्षिय यि हराएका पुरुषले तिघ्रोको माथिल्लो भागसम्म आउने लामो ज्
काठमाडौँ- काठमाण्डौको गोङ्गबु बस पार्क बाट बानियाँ टार रोड भई २.३ कि.मी. दक्षिण तर्फ लागेपछी आउँछ सुखावती स्टोर। त्यो पसल हेर्दा सामान्य पसल जस्तो देखिन्छ। यहाँ किताब, कपडा, भाँडाकुँडा र कम्प्युटर देखी अन्य धेरै उपयोगमा आउने बस्तु सामाग्री राखिएको छ। अरू पसल भन्दा यो पसल यसका रणले गर्दा भित्र छ कि यहाँ भएका सामाग्रीको मूल्य रू १० रुपैयाँ बाट सुरु हुन्छ। ‍यहाँ सामानको गुणस्तर र अवस्था हेरेर त्यसभन्दा माथि पनि मूल्य तोकिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा कोरिया पुगेका कास्कीका चिजमान गुरुङले त्यहाँ ‘ब्युटीफूल स्टोर’मा काम गर्ने मौका पाए जहाँ थुप्रै सेकेन्ड ह्यान्ड सामानलाई रिमेकिङ गरेर निम्न आय भएकाहरुलाई सस्तोमा बेचिन्थ्यो। त्यहाँ काम गरेपछि उनको एउटै सपना भयो– यो काम नेपालमा त गर्नैपर्छ। करिब १२ वर्ष कोरिया बसेका चिजमान सन् २०१२ मा यो आइडिया लिएर नेपाल फर्किए। चिजमान कोरियामा हुँदासम्म
काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्समा हुन्डीको अंश खोजी गर्न थालेको छ । हुन्डीलगायत गैरका’नुनी माध्यममार्फत विदेशबाट मुलुक भित्रिएको पैसा नेपाल आएपछि बैंकिङ प्रणालीमार्फत विभिन्न स्थानमा जाने क्रम बढेपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमि’ट्यान्समा हुन्डीको अंश खोज्न थालेको हो । विदेशबाट हुन्डीमार्फत रेमि’ट्यान्स आउँदा विदेशी मुद्रा नेपाल आउँदैन, विदेशमै रहन्छ । तर नेपालमा रहेका हुन्डीका एजेन्टले सम्बन्धित व्यक्तिहरू (पैसा प्राप्त गर्ने परिवार) सम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत पैसा पुर्‍याउँछन् । यस प्रक्रियामा हुन्डी कारोबार सञ्चालक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको मिलोमतो रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘यो प्रक्रियाका लागि हुन्डी कारोबारीहरूले पिन कोडसहित नै सम्बद्ध घरपरिवारलाई पैसा पठाइरहेका छन,’ स्रोतले भन्यो, ‘पिन कोडका लागि पनि रेमिट्यान्स कम्पनीको संलग्नता पुष्टि हुन्छ ।’ विदेशबाट हुन्डीमार्फत आ